ချန်ပီယံလိဂ်မှ မန်ယူထွက်ခွာရခြင်းရဲ့တရားခံများကို မန်ယူဂန္တဝင်ကြီးဝိန်းရွန်းနီသုံးသပ် – FBV SPORT NEWS
ချန်ပီယံလိဂ်မှ မန်ယူထွက်ခွာရခြင်းရဲ့တရားခံများကို မန်ယူဂန္တဝင်ကြီးဝိန်းရွန်းနီသုံးသပ်
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ လိုက်ဇက်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ၃-၂ ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ယူရိုပါလိဂ် Play-Off အဆင့်ကို ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရပါတယ်…..
ဒီနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်မှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ရှုံးနိမ့်ခြင်း အောင်နိုင်ခြင်းတို့ရဲ့ တရားခံများစွာကို ဒီအချိန်လူတိုင်း သုံးသပ်နေကြမှာပါ….ဝိန်းရွန်းနီကတော့ ပညာသားပါပါနဲ့ သုံးသပ်တုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်…
ဝိန်းရွန်းနီ က ” ကျနော်တို့ မန်ယူ အသင်းမှာရှိစဉ်အခါက ရလဒ်ဆိုးတွေ အများကြီး ကြုံဖူးပါတယ်….ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် မန်ယူ ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးပွဲတွေလိုမျိုးတော့ ကျနော်တို့ တကြိမ်မှမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး……
ပထမဆုံး အိုလေ ဒီပွဲမှာ သူဟာ သူ့ရဲ့ ခေါင်းမာမှု ကစားကွက်ကစားသမားယုံကြည်မှုတွေကြောင့် အမှားတွေဖြစ်ခဲ့၇ပါတယ်….စိန်ပွင့်ကစားပုံဟာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ကို အောက်ဆုံးကို ဆွဲပို့စေခဲ့တာပါ…..အသားကျလာတဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားကွက်ကို အရံ Game Plan မရှိခဲ့ဘဲ သုံးခဲ့တော့ မန်ယူအတွက် အများကြီးနစ်နာခဲ့ရပါတယ်…..နိုင်ပွဲတချို့ကတော့ ကစားကွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တဖက်အသင်းအမှားကို ကစားသမားတွေက တွဲလုံးတွေကနေ အဆုံးသတ်ပေးခဲ့လို့ ဂိုးရခဲ့တာပါ…
အခု ထပ်ပြီး ထပ်ပြီးပြောနေရတာက မန်ယူ နောက်တန်း ဗဟိုခံစစ်မှူးတွေကို သုံးယောက်အထိုင်ထားတဲ့ကိစ္စ ပါဘဲ ဖာဂူဆန်လက်ထက်မှာတောင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ ခံစစ်အတွဲဖြစ်တဲ့ ဗီဒစ် ဖာဒီနန် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာတောင် ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ပွဲကို အခုလို မထားဘူး…..တခြားလူတွေ ဝေဖန်တာထက် ကျနော်က ကွဲလွဲချင်ကွဲလွဲမယ် ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန်လည်း ကျနော့်လို တွေးပြီး မန်ယူအသင်းအတွက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေမယ်ဆိုတာ မလွဲပါဘူး….
ဒီဂီယာကိုတော့ အပြစ်တင်တာထက် နောက်တန်းအားနည်းချက်ကြောင့် ဂိုးသမားတယောက်ဟာ ဗျာများခဲ့ရတယ်…တကယ်တန်း ပွဲထဲမှာ ပြန်ကြည့်တော့ သူလုပ်ပိုင်ခွင့်နည်းနေတယ် နောက်တန်းတွေ မသေသပ်တော့ ဂိုးသမားလည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး….ဒါပေမဲ့ ဒီဂေး ဒီပွဲမှာ ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး….
ကွင်းလယ်မှာ ဖရက်မပါလာတော့ တော်တော်အားလျော့နေတယ်….နောက်ပြီး ပေါ့ဘာ မထည့်ဘဲ မာတစ်ကိုထည့်သုံးလာတယ် ပထမပိုင်းထဲက လိုက်ဇက်က ဖိအားပေးလာတယ်တောင်ပံတွေကနေ နောက်တန်း ကလည်း မထိမ်းနိင်ဘူး…..တိုက်စစ်မှာ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို တယောက်တည်း အသုံးချချင်နေတဲ့ ဂရင်းဝုဒ်ကြောင့် ၂ ဂိုးတိတိနစ်နာခဲ့ရတယ်….
ဒီလို လူငယ်ကစားသမားတွေ ဟာ ကွင်းထဲမှာတကိုယ်တော်ဆန်နေပြီး ကစားမယ်ဆို မန်ယူ ဖလား၇ပိုင်ခွင့် အိမ်မက်တွေနဲ့ ဝေးသွားရလိမ့်မယ်….နောက်ပြီးတော့ တောင်ပံတိုက်စစ်နေရာမှာ ပြည့်စုံတဲ့ မာတာနဲ့ ရတ်ဖို့စ်ကို သုံးပေးပါလို့ အိုလေ ကို အကြံပေးချင်ပါတယ်….မန်ယူအသင်းက လိုအပ်တယ်ဆို တချိန်ကျ ပြန်လာချင်ပါသေးတယ်…ဆိုပြီး ဝိန်းရွန်းနီကပြောသွားခဲ့ပါတယ်….
Source From Rooney Fan Blogs